Indostria : orinasa nijoro tamin’ny taona 40 mbola mihodina | NewsMada
Indostria : orinasa nijoro tamin’ny taona 40 mbola mihodina
Par Webmaster Two sur 15/11/2016
Nitsidika orinasa vitsivitsy eto an-dRenivohitra ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Chabani Nourdine, sy ny mpiara-miasa aminy. Anisan’ny notsidihina ny Comacat sy ny Codal. Ny voalohany, efa nijoro hatramin’ny taona 1945, manodina caoutchouc sy mameno kodiarana efa niasa, maherin’ny arivo isam-bolana. Olona anjatony no miasa amin’io orinasa io. Sampana iray miaraka amin’ny Comacat ny Vitafoam, mahavita kidoro (éponge) 1.200 isan’andro.
Ny Codal, orinasa efa niorina tamin’ny taona 1949, mpanodina karazam-boankazo maro. 50 % amin’ny vokatra vitan’ny Codal miondrana any ivelany, ankoatra izay hita any amin’ny tsena lehibe eto an-toerana. Manampy betsaka ny tantsaha mpamatsy ity orinasa ity sy mampiofana azy ireo hahazoam-bokatra bio.
“Zava-dehibe ho anay ny mitsidika ireo indostria eto an-toerana hahitana ny fomba fiasan’izy ireo sy ny olana sedrainy, hahafanay manampy azy ireo”, hoy ny minisitra. Fantatra aloha fa olana iombonan’ny indostria maro ny tsy fahampian’ny famatsiana herinaratra avy amin’ny Jirama. Mampitombo ny vola miasa io olana iray io amin’ny fampiasana famatsiana angovo mandeha amin’ny solika. Na izany aza, nidera ny ezaka vitan’ireo orinasa roa ireo ny minisitra, nandritra ny vanim-potoana rehetra nolalovany. Efa maty avokoa na lasan’ny sehatra tsy miankina ny orinasam-panjakana maro taorian’ireo.